ချုပ်ရိုး – အဆိုပါ Tailoress
စက်တင်ဘာ 21, 2017 | အထူးပြောစရာမရှိ | ချုပ်ရိုး, နည်းစနစ်, သိကောင်းစရာများ
ကွဲပြားခြားနားသောအထည်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောချုပ်ရိုးရှိပါတယ်, ချောနှင့်အဝတ်. သင်သာကျွမ်းကျင်ပါကအထည်ချုပ်တံသင်မရှိဘဲချုပ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်အများဆုံးကိစ္စများတွင်ကတံသင်ကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်. မှန်ကန်စွာချုပ်ဘို့အတူတူနှစ်ခုအပိုင်းပိုင်း pin ရန်, မှာချုပ်ရိုးလိုင်းမှညာဘက်ထောင့်မှာ pin ကိုထည့်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ […]
မေ 27, 2015 | အထူးပြောစရာမရှိ | ချုပ်ရိုး
ပန်းကပ်ပုံဖော်ခြင်းချုပ်ရိုးဒီချုပ်ရိုးအထူးသဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောဇာအဖြစ် patterned ထည်အဘို့ဖြစ်၏, နှင့် motif. 1. သင်ဤချုပ်ရိုးထဲမှာပါဝင်လိုသည့်အလှဆင်ဒေသများတွင်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအားဖြင့်သင့်ကိုအပိုင်းပိုင်းပြင်ဆင်ပါ. သင် basted ချုပ်ရိုးလိုင်းတစ်ဦးချုပ်ရိုးစရိတ်နှင့်ဗီဒီယိုကလစ်ထွက်ခွာစောင့်ရှောက်ရန်လိုသောပုံစံများပတ်ပတ်လည် Cut. 2. Fold under the seam allowance […]